Home Electronic Electric Tuya App Wifi Smart Lock ၏လုပ်ဆောင်ချက် - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
Home Electronic Electric Tuya App Wifiစမတ်လော့ခ်လုပ်ဆောင်ချက်
စမတ်သော့ခလောက်များ နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးအချက်မှာ လုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ ရိုးရာတံခါးသော့ခတ်မှုများသည် တံခါးအပြင်ဘက်အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အနည်းငယ် စိတ်ပူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ထမ်းများကို အယောင်ဆောင်သည့် ဥပဒေချိုးဖောက်သူများစွာရှိနေသေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုရှိတယ်။ သို့သော်၊ သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေစရာ မလိုပါ။စမတ်သော့ခတ်. တံခါးအပြင်ဘက်က အခြေအနေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်တယ်။
အသံလုပ်ဆောင်ချက်သည် တန်ဖိုးကြီးသောလေထုကို ထင်ဟပ်စေရုံသာမက အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကျသည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်တွင် ကလေးသူငယ်များ သို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အိုများရှိပါက၊ ၎င်းတို့သည် အစပိုင်းတွင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စက်ကိရိယာများ လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေး မသိသာသော်လည်း အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်၊စမတ်သော့ခတ်အသံသတိပေးချက်များပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက် မှားယွင်းနေသည် သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက အသံသတိပေးချက်များကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သော့ကိုဖွင့်ပြီး တံခါးကိုပိတ်လိုက်ပါ။
3. စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်
အမြင်အာရုံခံသော့ခတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းတွင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက် သေချာပေါက်ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က တံခါးခေါင်းလောင်းကို နှိပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စနစ်အား ဦးစွာစစ်ဆေးနိုင်ပြီး တံခါးဖွင့်နိုင်သည်ရှိမရှိ လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန် ဧည့်သည်များ၏ လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်ခန်းဝန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားမလိုအပ်ဘဲ တံခါးဖွင့်ခြင်းကိစ္စတွင်၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွင် ထည့်သွင်းထားသောစနစ်မှတစ်ဆင့် တံခါးအပြင်ဘက်ရှိလူများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် တံခါးတွင် မော်နီတာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တူညီပြီး ၎င်းသည် အလွန်အသိဉာဏ်ရှိသော စောင့်ကြည့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တံခါးအပြင်ဘက်ရှိ အခြေအနေကို 24 နာရီကြာမှတ်တမ်းတင်ရုံသာမက အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် ပုံမှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ရသည့်အခါတွင်လည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။စမတ်သော့ခတ်သင့်အား သတိပေးရန် နှိုးစက်တစ်ခု ပေးပို့လိမ့်မည်။ .
4. အဝေးထိန်းလုပ်ဆောင်ချက် လုပ်ဆောင်မှု
အဝေးထိန်းစနစ်သည် ရုပ်ထွက်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု၏ အလွန်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။စမတ်သော့ခတ်. အိမ်မှာမရှိတဲ့အခါ၊ မိဘတွေ ဒါမှမဟုတ် လူသစ်တွေလာလည်ရင် အဲဒါကို အရင်ဖွင့်ဖို့ အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အိမ်မှာမရှိတာကြောင့် မိဘတွေ ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ ရှက်စရာအခြေအနေတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးက ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ အလုပ်မှာ ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တောင် ကလေးအတွက် တံခါးကို အဝေးကနေ အရင်ဖွင့်လို့ရတယ်။
Circuit Breaker ၏ ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် ၂